Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafampana Aostralianina » Nandoro trano fandraisam-bahiny COVID-19 tany Aostralia
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Nosamborin’ny polisy ny vehivavy iray 31 taona, izay voalaza fa nandrehitra afo teo ambanin’ny fandriany, nandoro trano fandraisam-bahiny iray izay nasainy nanao quantine nandritra ny efatra ambin’ny folo andro izy sy ny zanany roa.
Nirefodrefotra ny afo nirehitra ny rihana ambony tao amin'ny Hotely Pacific tao an-tanànan'i Cairns any avaratra atsinanana Aostralia, nanery ny fandroahana ireo vahiny hotely 160 mahery.
Nampangaina ho nandoro trano ilay vehivavy Queensland manam-pahefana.
Tsy nisy ny naratra, fa ny fahasimbana tamin'ilay trano dia 'manan-danja' ary nanery ny manampahefana hamindra ny olona any amin'ny tobim-pitsaboana COVID-19 hafa.
Nilaza ny manam-pahefana fa nisy vehivavy nandrehitra afo taorian'ny nandaniany "andro roa" tamin'ny quantine naharitra roa herinandro tao amin'ny hotely rehefa avy niampita tany Queensland avy any amin'ny fanjakana hafa.
Talohan'ny zava-nitranga dia voalaza fa niteraka korontana hafa tsy voafaritra ho an'ny mpiasa ihany koa izy nandritra ny nijanonany.
Nentina teo ambany fiahian’ny polisy ny zanany roa, raha nandoro sy nanimba an-keriny kosa ilay ramatoa, ary tokony hiakatra fitsarana anio.
Nandritra ny fihanaky ny valan'aretina COVID-19, Aostralia dia nahatratra 2,000 teo ho eo ny fahafatesany satria nampiasa ny sasany amin'ireo fepetra fanakatonana sy fanakatonana draconiana indrindra eran'izao tontolo izao, izay misy fiantraikany tsy amin'ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena ihany fa koa amin'ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena, mba hitazonana ny areti-mifindra ho ambany indrindra mandra-pahatongan'ny ankamaroan'ny mponina.
Tahaka ny niomanana hanokatra indray ny sisin-taniny ho an'ny mpifindra monina sy mpianatra mahay tamin'ny 1 Desambra ny firenena, dia hita tamin'ny mpandeha avy any atsimon'i Afrika ny tranga voalohany tamin'ny Omicron coronavirus vaovao, izay mety hanimba ny drafitra.